Madaxweyne Trump Oo Si Xun U Weeraray Madaxda Sirdoonka Dalkiisa + [ Sababta ] – Ilays News
[ September 20, 2019 ] Amiirka Al Shabaab Oo Hadley Shaaciyey-na Cidii Ay La Damac Sanaayeen Qaraxii Eng Yariisow Lagu Dilay + [ Muuqaal ]	Featured
[ September 20, 2019 ] Ciidamada Booliska Somaliland Oo Xabsiga Dhigay Saxafigii Saddexaad Oo Ka Hawl Gala Shabakada Hadhwanaag	Featured
[ September 20, 2019 ] Iran Oo Ku Hanjabtey In Hadii Weerar Lagu Soo Qaado Ay Ka Bixin Doonto Jawaab Ciqaab Adag Leh	Featured
[ September 20, 2019 ] Faysal Cali Waraabe Oo Madaxweynaha U Gudbiyay Xubinta Uu U Xulay Guddiga Cusub Ee Doorashada + [ Waa Kuma ]	Featured
[ September 20, 2019 ] Sirdoonka Mareykanka Oo U Digay Madaxweyne Trump	Featured
Madaxweyne Trump Oo Si Xun U Weeraray Madaxda Sirdoonka Dalkiisa + [ Sababta ]
USA (Ilays-News):- Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay laamaha sirddoonka dalkiisa in aysan waxbo kala socon marka ay timaado arrimaha dalka Iiraan isla markaasna iska foggeeyay khatarta la sheegay inay uga imaaneyso dhinaca Kuuriyada Waqooyi.
“Waa in aad iska ilaalisaan Iiraan, sirddoonka waa inay dib ugu laabtaan waxbarashada ama dugsiyada si ay wax usoo bartaan” ayuu Trump ku yidhi bartiisa Twitter-ka.
Hadalka khalafsan ee kasoo baxay Donald Trump ayaa kusoo beegmaya xilli sirddoonka Mareykanka ay shaaciyeen warbixin sheegaysa in Iiraan aysan ku howlaneyn sameynta hubka Nukliyerka.
Agaasimaha qaran ee sirddoonka Mareykanka iyo saraakiil sar sare ayaa Salaasadii warbixinta u gudbiyay aqalka senetka ee dalkaasi.
Trump wuxuu bilaabay barnaamij diblumaasiyadeed oo ku hagaajinayo xidhiidhka diblumaasiyadeed ee kala dhexeeyo Kuuriyada Waqooyi, waxaa uu bishii June ee sannadkii lasoo dhaafay dalka Singapore kulan kula yeeshay hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un.
Trump muxuu ka yiri arrinta Iiraan?
Qoraallo uu kusoo bandhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in saraakiisha sirddoonka Mareykanka ‘aysan ogeyn khatarta uga imaaneyso dhinaca Iiraan ayna u muuqato kuwo aanan heyn wax jawaab ah oo ay uga falcelinayaan halistaas’.
Warbixinta sirddoonka ayaa sidoo kale ka digtay ‘damaca dalalka gobolka ee sare u qaadidda awoodda militari’ taasina ay caqabad ku noqon karta danaha mustaqbalka ee Mareykanka.